Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fitsaboana hepatita C amin'ny alalan'ny fitiliana origami vaovao
Ny fitsapana vaovao ho an'ny hepatita C izay mampiasa taratasy mivalona amin'ny endrika origami mba hanaterana fitiliana haingana, marina ary takatry ny vidiny dia mety hanampy amin'ny ady maneran-tany amin'ilay viriosy mahafaty.
Ny fitsapana, novolavolain'ny injeniera biomedical sy virologista avy ao amin'ny Oniversiten'i Glasgow, dia manome valiny mikoriana miandalana mitovy amin'ny fitsapana an-trano COVID-19 ao anatin'ny 30 minitra.
Ao amin'ny taratasy vaovao navoaka androany tao amin'ny diary Nature Communications, ny ekipa mpikaroka dia mamaritra ny fomba namolavolany ny rafitra. Izy io dia miorina amin'ny fandrosoana teo aloha amin'ny diagnostika haingana sy virologie ao amin'ny Oniversite, mitondra valiny amin'ny 98% marina.
Hepatita C, virosy mifindra amin'ny rà izay manimba ny atiny, dia tombanana fa hisy fiantraikany amin'ny olona 70 tapitrisa mahery eran'izao tontolo izao. Miadana ny fiantraikan'ny viriosy amin'ny atiny, ary mety tsy ho fantatry ny marary fa voan'ny aretina izy ireo raha tsy efa marary mafy miaraka amin'ny fahasarotana toy ny cirrhose na homamiadana.
Raha tsikaritra alohan'ny handrosoan'ny aretina ilay aretina, dia azo tsaboina tsara amin'ny fanafody mora azo sy mora azo. Na izany aza, hatramin'ny 80 isan-jaton'ny olona voan'ny viriosy dia tsy mahafantatra ny otrik'aretina mandra-pahatongan'ny fahasarotana ara-pitsaboana.
Vokatr'izany dia olona 400,000 eo ho eo eran'izao tontolo izao no matin'ny aretina mifandray amin'ny hepatita C isan-taona, izay maro amin'izy ireo no nety ho voavonjy tamin'ny fitiliana sy ny fitsaboana teo aloha.
Amin'izao fotoana izao, ny fihanaky ny hepatita C dia voamarina amin'ny toe-javatra laboratoara amin'ny alàlan'ny dingana roa izay mitsapa ny ra amin'ny fisian'ny antibody sy ny fahitana ny RNA na ny antigène fototra.
Mety haka fotoana be ny fizotran'ny famoahana vokatra, mampitombo ny mety tsy hiverenan'ny marary sasany manao ny fitsapana mba hahalalana ny vokatra. Voafetra ihany koa ny fahafahana manao fitiliana any amin'ny firenena ambany sy antonony, izay misy ny ankamaroan'ny olona voan'ny hepatita C.
Na dia novolavolaina tato anatin'ny taona vitsivitsy aza ny fitsapana azo entina mitondra vokatra haingana kokoa, dia mety ho voafetra ihany ny fahamarinan'izy ireo, indrindra amin'ny fototarazo olombelona samihafa.
Ny rafitra vaovaon'ny ekipan'ny Oniversiten'i Glasgow, na izany aza, dia mety kokoa amin'ny fampiasana manerana izao tontolo izao. Namboarina tamin'ny rafitra mitovy amin'izany novolavolain'izy ireo izy io mba hanaterana fitiliana haingana ho an'ny tazomoka, izay nosedraina tamin'ny vokatra mampahery tany Ouganda.
Mampiasa taratasy savoka miforitra toy ny origami ilay fitaovana mba hanomanana santionany amin'ny dingana iray fantatra amin'ny hoe loop-mediated isothermal amplification, na LAMP. Ny dingan'ny fanodinkodinana taratasy dia ahafahan'ny santionany voakarakara sy aterina any amin'ny efitrano kely telo ao anaty baoritra iray, izay afanain'ny milina LAMP ary ampiasaina hitsapana ny santionany amin'ny fisian'ny hepatita C RNA. Tsotra ihany ilay teknika ka manana ny mety ho aterina any an-tsaha amin'ny ho avy, avy amin'ny santionan'ny ra nalaina tamin'ny marary iray tamin'ny alalan'ny fanondro.
Manodidina ny 30 minitra eo ho eo ny dingana. Ny valiny dia aterina amin'ny alàlan'ny tsipika mikoriana mora vakiana toy ny fitsapana bevohoka na fitsapana COVID-19 ao an-trano, izay mampiseho tarika roa ho an'ny vokatra tsara ary tarika iray ho an'ny ratsy.
Mba hitsapana ny prototype azy ireo, ny ekipa dia nampiasa ny rafitra hamakafaka santionany plasma 100 tsy fantatra anarana avy amin'ny marary voan'ny aretina HCV mitaiza ary santionany 100 hafa avy amin'ny marary HCV-ratsy, izay niasa ho vondrona mpanara-maso. Nosedraina ihany koa ny santionany tamin'ny alàlan'ny fitiliana hepatita C Abbott RealTime manara-penitra amin'ny indostria mba hanamafisana ny valin'ny LAMP. Ny fitsapana LAMP dia namoaka valiny izay 98% marina.
Ny ekipa IS dia mikendry ny hampiasa ny rafitra amin'ny fitsapana eny an-kianja any Afrika atsimon'i Sahara amin'ny taona ho avy.
Ny taratasin'ny ekipa, mitondra ny lohateny hoe 'Loop mediated isothermal amplification ho fitaovana mahery vaika amin'ny fitiliana ny viriosy hepatita C', dia navoaka tao amin'ny Nature Communications. Ny fikarohana dia tohanan'ny famatsiam-bola avy amin'ny Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Medical Research Council ary ny Wellcome Trust.
Ny Fanafihan'ny Synagoga Hafahafa any Texas: Ny hevitra rehetra dia ahy manokana Janoary 17, 2022
Fizahan-tany Meksikana amin'ny fomba SKAL: Finamana, Toast manokana ary kintana amin'ny AGM Janoary 16, 2022
Divain'i Espaina: Andramo izao ny fahasamihafana Janoary 15, 2022
Hawaii, Alaska, morontsiraka andrefan'i Etazonia ankehitriny eo ambanin'ny Tsunami Advisory taorian'ny fipoahan'ny volkano Tonga Janoary 15, 2022
Ny mpiasa rehetra tsy vita vaksiny dia voarara amin'ny toeram-piasana any Singapore Janoary 15, 2022
Sidina New Norvezy/EU mankany Etazonia amin'ny Norse Atlantic Airways Janoary 15, 2022
Ny tsipika fitsangantsanganana fahatelo dia nanao sonia fifanarahana seranan-tsambo vaovao miaraka amin'i Hawaii Janoary 15, 2022
Fitsapana klinika vaovao ho an'ny fikorontanan'ny fampiasana Opioid Janoary 15, 2022
Fironana ara-teknolojia 6 ambony indrindra amin'ny 2022 Janoary 15, 2022
Ahoana no fiantraikan'ny fameperana COVID amin'ny ankizy ankehitriny Janoary 15, 2022
Fianarana vaovao momba ny vokatry ny fitondrana vohoka COVID-19 Janoary 15, 2022
Ny fandinihana vaovao dia mampiseho fa ny fifindra-monina avy any ambanivohitra mankany amin'ny tanàna dia mety hitarika ho amin'ny matavy loatra Janoary 15, 2022
Ny fandinihana vaovao dia nahita fa nitombo ny homamiadan'ny nono maneran-tany Janoary 15, 2022
Fitsangatsanganana any India araka ny fahitan'ireo mpilalao indostrialy lehibe Janoary 15, 2022
Noraràn'i Hong Kong izao ny mpitatitra avy amin'ny firenena 150 Janoary 15, 2022
Nilaza ny EU fa tsy manery ny zotram-piaramanidina hanao sidina 'matoatoa' ny fitsipiny Janoary 14, 2022
Manamaivana ny fameperana COVID-19 i Holandy na dia mihamitombo aza ny otrikaretina vaovao Janoary 14, 2022
Mitalaho fanampiana amin'izao krizy ara-bola izao ny Opérateur Tour India Janoary 14, 2022
Nahasarika olona 3,000,000 19 ny hetsika superspreader India na dia eo aza ny firongatry ny COVID-XNUMX vaovao Janoary 14, 2022
Sidina Chisinau vaovao avy any amin'ny seranam-piaramanidina Budapest amin'ny Wizz Air Janoary 14, 2022
Toerana fizahan-tany any Etazonia miaraka amin'ny saram-piantsonana lafo indrindra Janoary 14, 2022
Ny firenena mahantra dia mandà ny vaksiny COVID-19 maimaimpoana natolotry ny Firenena Mikambana Janoary 14, 2022
Lalana mankany amin'ny Super Bowl ankehitriny misy Fritos Janoary 14, 2022
Ny isan'ny maty amin'ny COVID dia voasokajy ho zavatra tsara Janoary 14, 2022
Saron-tava N95 no soso-kevitra vaovao hiarovana amin'ny COVID Janoary 14, 2022
Ny tatitra vaovao dia maminavina asa cannabis vaovao 100,000 amin'ny 2022 Janoary 14, 2022
Ny fitsaboana vaovao dia mety hanemotra ny fivoaran'ny aretin'i Alzheimer Janoary 14, 2022
NASA dia manolotra fandrakofana mivantana momba ny Spacewalk Rosiana Cosmonauts Janoary 14, 2022
Taratasy fotsy vaovao momba ny hosoka, fako ary fanararaotana mifandraika amin'ny COVID-19 Janoary 14, 2022
Ny Fitsarana Tampony Amerikana dia manohana ny fepetra momba ny vaksinin'ny mpiasan'ny fahasalamana Janoary 14, 2022
Famantarana 6 Mety ho eo amin'ny vatolampy ny fanambadianao Janoary 14, 2022
Ny fahasimban'ny sela ati-doha avo kokoa amin'ny marary COVID-19 noho ny mararin'ny Alzheimer Janoary 14, 2022
Fanantenana Vaovao ho an'ireo manana Dementia Janoary 14, 2022
Sandals Foundation: Manao fahasamihafana lehibe any Bahamas Janoary 14, 2022
Tale Jeneralin'ny Delta: mpiasan'ny zotram-piaramanidina 8,000 no nizaha toetra tsara ho an'ny COVID-19 Janoary 14, 2022
Norveziana Cruise Line dia namoaka ny Viva Norveziana vaovao Janoary 14, 2022
Ny fizahan-tany Karaiba dia mbola manantena ny hiverenany na dia eo aza ny fikorontanan'ny Omicron vaovao Janoary 14, 2022
Ny famandrihana sidina any Singapore dia nihoatra ny faran'ny VTL Janoary 13, 2022
Ny Princess Cruises dia niangavy ho meloka indray tamin'ny raharaha fandotoana solika Janoary 13, 2022
Ny FAA dia mampiakatra risika 5G ho an'ny 'fiaramanidina misy altimetre tsy voasedra' Janoary 13, 2022